Gargaarka Maaliyadeed ee daryeelka ilmo soo rididda ee Falls Church, VA
Ma u baahan tahay gargaar lacageed oo ku saabsan kharashka adeegyadaada caafimaad?
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay u heellan tahay bixinta daryeelka SAFE iyo SHARCI iyadoon loo eegin booska dhaqaale ee bukaanka. Xarunteena waxay lashaqeysaa ururada maalgalinta kuwaas oo laga yaabo inay awoodaan inay kucaawiyaan hadaad ubaahantahay kaalmo dhaqaale Ka wac Xaruntayada 703-532-2500 lana hadal mid ka mid ah Barayaasheena Bukaanka si aad u codsato macluumaad dheeraad ah. Waxaad sidoo kale ku muujin kartaa tan foomka khadka tooska ah lagu codsado ballan.
Halkan guji si aad u aragto Khidmadaha Adeegyadeena
Aqoonyahanadayada Bukaanka ah waxay ku baari karaan adiga oo ka wakiil ah Xiriirka Qaranka ee Ilmo soo rididda (NAF) si loo go'aamiyo inaad u-qalanto gargaar lacageed iyo in kale. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinaynaa inaad la xiriirto hay'ado kale oo sidoo kale kaa caawin kara:
The Sanduuqa DC ee Ilmo soo rididda waxay caawimaad siisaa dadka deggan DC, Maryland, iyo Virginia; iyo waliba dadka ka imanaya gobolka DC banaanka meelaha kor ku xusan. Fadlan soo wac 202-452-7464 oo u daa farriin cod ah maamulayaasha kiiskooda. Ku dar magacaaga iyo lambarka taleefankaaga, inta toddobaad ee aad uur leedahay, taariikhda ballanta dhakhtarkaaga, iyo haddii ay caadi tahay iyo in kale inay iyagu kuu daayaan farriin cod ah. Tabaruce ayaa soo celin doona taleefankaaga 24-48 saacadood gudahood
The Mashruuca Xorriyadda Taranka ee Richmond laga yaabaa inuu kaa caawiyo ilaha ilmo soo rididdaada. Wareegyadooda maalgalintu waxay bilaabmayaan 1da iyo 15ka bisha. Fadlan soo wac 1-888-847-1593 maalmahaas bisha, ka tag farriin faahfaahsan oo leh macluumaadka ballantaada iyo Isu-duwaha Qaadashada ayaa kugu soo celin doona taleefankaaga 24-48 saacadood gudahood.
The Sanduuqa Ilmo soo rididda ee Blue Ridge ayaa u adeegaysay shakhsiyaadka u baahan caawimaad bixinta daryeelka ilmo soo rididda ilaa 1989. Waxay awoodi karaan inay ka caawiyaan maalgelinta ilmo soo rididda ee saddexda bilood ee labaad ee bukaannada ku nool Waqooyiga Virginia. Fadlan soo wac 434-963-0669 oo ka tag fariin cod ah. Tabaruce ayaa soo celin doona taleefankaaga 24-48 saacadood gudahood.
The Sanduuqa Helitaanka Ilmo Soo rididda Wabiga Cusub waxay siisaa taageero maaliyadeed oo toos ah iyo mid wax ku ool ah Koonfur-galbeed Virginians iyo Appalachians kuwaas oo aan awoodin inay iska bixiyaan kharashka ilmo soo rididda. NRAAF waxay kaloo maalgelisaa dadka ku nool gobollada kale ee gobolka iyo/ama u socdaalaya, ka yimid, ama gudaha Virginia si ay ilmo iska soo ridaan Virginia kuwaas oo jira 10+ toddobaad. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo bixinta kharashka ilmo soo rididda, wac ama u soo dir khadka caawinta sirta ah 1-833-672-2310 or 540-553-8152. Dooro ext. 1 taageero dhaqaale. Waxa kale oo aad buuxin kartaa foomkooda codsiga taageerada onlaynka ah. Tabarucaha ayaa ku soo celin doona wicitaankaaga 24-48 saacadood gudahood.
The Sanduuqa Ilmo soo rididda ee Baltimore waa iskaa wax u qabso oo dhan, oo ah hay'ad samafal ah oo siisa caawimaad dhaqaale dadka ku nool Maryland daryeelka ilmo soo rididda Fadlan soo wac 443-297-9893 oo ka tag fariin cod ah. Ku dar lambarka taleefankaaga, inta usbuuc ee aad uur leedahay, taariikhda ballanta dhakhtarkaaga, iyo haddii ay caadi tahay iyo in kale inay iyagu kaa tagaan fariin cod ah. Tabaruce ayaa soo celin doona taleefankaaga 24-48 saacadood gudahood.
Annagu haddaanu nahay Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls waxaan aqoonsannahay in bukaannadayadu laga yaabo inay la kulmaan caqabado dhaqaale inta lagu jiro cudurkan. Fadlan nala soo socodsii haddii aad xiisaynayso qorshe lacag-bixineed marka aad ballanta qabsanayso.
Ma jeclaan lahayd inaad ka caawiso kuwa u baahan kaalmada si ay u bixiyaan kharashka daryeelka ilmo soo rididda ee FCHC? Fadlan hubi our Nalasoo bogga xulashooyinka ku saabsan sida aad isbeddel ugu sameyn karto!